အသင်းကြီးတွေ အခြေအနေ ကောင်းနေတဲ့ ယူရို ဥရောပ ခြေစစ်ပွဲများ
အသင်းကြီးတွေ အခြေအနေ ကောင်းနေတဲ့ ယူရို ဥရောပ ခြေစစ...
8 ก.ย. 2562 - 18:59 น.
ဥရောပ နိုင်ငံ အများစုမှာ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ခြေစစ်ပွဲတွေကို ဒီတစ်ပတ် လိဂ်ပွဲတွေ ရပ်နားတဲ့ အချိန် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉နိုင်ငံက ယူရို ၂၀၂၀ ပွဲစဉ်တွေကို လက်ခံကျင်းပခွင့်ရဖို့ လျောက်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံ ၁၂နိုင်ငံ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဖွင့်ပွဲကို အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့က Stadio Olimpico ကွင်းမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ပိတ်ပွဲနဲ့ ဖိုင်နယ်ကိုတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့က ဝင်ဘလေကွင်းကြီး မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံပေါင်း ၅၅နိုင်ငံ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲတွေကိုတော့ ၂၀၁၉ မတ်လ ကတည်းကနေ ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ပွဲစဉ် တစ်ဝက်ကျော်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကိုဆိုဗို နိုင်ငံကတော့ ပထမဆုံး အကြိမ် ဥရောပ ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တာပါ။ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၅၅နိုင်ငံကို ၅သင်းပါတဲ့ အုပ်စု ၅ခုနဲ့ ၆သင်းပါဝင်တဲ့ အုပ်စု ၅အုပ်စုကို ခွဲခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီကတော့ အုပ်စု B မှာပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြင်သစ်ကတော့ အုပ်စု H၊ ၃ကြိမ် ချန်ပီယံဟောင်း ဂျာမနီက အုပ်စု C မှာ နယ်သာလန်နဲ့ အတူကျခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီနဲ့အတူ ပူးတွဲအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ စပိန်ကလည်း F မှာပါဝင်ပြီး နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်က အုပ်စု A ၊ ကမ္ဘာ့နံပါတ်၁ ဘယ်ဂျီက အုပ်စု I နဲ့ ၁၉၆၈ ချန်ပီယံ အီတလီက အုပ်စု Jမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ
အုပ်စု A မှာ နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်က ၃ပွဲကန် ၃ပွဲစလုံးကို နိုင်ထားပြီး ၉မှတ်ရထားပါတယ်။ အင်္ဂလန်ဟာ ချက်ကို ၅ဂိုးပြတ်၊ ဘူဂေးရီးယားကို ၄ဂိုးပြတ်နဲ့ မွန်တီနီဂရိုးကို ၅-၁ဂိုးနဲ့ နိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအုပ်စုမှာ ပထမဆုံး ခြေစစ်ပွဲဝင်တဲ့ ကိုဆိုဗိုက ၈မှတ်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိပါတယ်။
အုပ်စု Bမှာတော့ ယူရို ၂၀၁၆ ချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီ ပါဝင်ပြီး ယူကရိန်းက ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ယူကရိန်းက အုပ်စု ၅ပွဲမှာ ၄ပွဲနိုင်၊ ၁ပွဲသရေကျထားပြီး ၁၃မှတ်နဲ့ အမှတ်ဖြတ်ထားတာပါ။ ပေါ်တူဂီကတော့ အစောပိုင်း ၂ပွဲကို သရေကျခဲ့ပြီးမှ မနေ့က ကန်ခဲ့တဲ့ ဆားဘီးယားနဲ့ပွဲကို အဝေးကွင်းမှာ ၄-၂ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့လို့ ၅မှတ်နဲ့ ဒုတိယနေရာ တက်လာပါတယ်။
ဒီအုပ်စုက ဂျာမနီနဲ့ နယ်သာလန်တို့လို ထိပ်သီး နှစ်သင်းပါဝင်ပြီး မြောက်အိုင်ယာလန်က ဦးဆောင်နေပါတယ်။ မြောက်အိုင်ယာလန်ဟာ ကစားပြီးခဲ့တဲ့ ၄ပွဲစလုံးနိုင်ထားပြီး ၁၂မှတ် ရထားတာပါ။ ဂျာမနီကတော့ သောကြာနေ့က နယ်သာလန်ကို ၄-၂ဂိုးနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးခဲ့ပြီး ၃ပွဲမှာ ၉မှတ် ရထားပါတယ်။ နယ်သာလန်က ၃ပွဲမှာ ၆မှတ်ရထားပြီး အုပ်စု တတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
ခြေညီတဲ့ အသင်းတွေများတဲ့ ဒီအုပ်စုမှာ အိုင်ယလန်က ၅ပွဲကန်အပြီးမှာ ၁၁မှတ်နဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒိန်းမတ်က ၄ပွဲမှာ ၈မှတ်ရထားပြီး ဆွစ်ဇာလန်ကတော့ ၃ပွဲနိုင် ၅မှတ်သာ ရထားသေးပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ဖိုင်နယ်တက်ခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားက ဟန်ဂေရီနဲ့အတူ အုပ်စုမှာ ပူးတွဲ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ခရိုအေးရှားဟာ ၄ပွဲကစားအပြီးမှာ ဝေးလစ်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဆလိုဗာကီးယားတို့ကို နိုင်ပြီး ဟန်ဂေရီကို ရှုံးထားတာပါ။ ဟန်ဂေရီးကလည်း ၄ပွဲမှာ ၉မှတ်ရထားပါတယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ် ကိုင်နေတဲ့ ဝေးလ်စ်ကတော့ အဇာဘိုင်ဂျန်ကို ၂-၁ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့လို့ ၆မှတ်ရထားပြီး အုပ်စုတွင်းမှာ မျှော်လင့်ချက် ရှိနေသေးပါတယ်။
၃ကြိမ် ချန်ပီယံဟောင်း စပိန်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အုပ်စုကို ဦးဆောင်နေပါတယ်။ စပိန်ဟာ ကစားပြီးခဲ့တဲ့ ၅ပွဲစလုံးကို နိုင်ထားပြီး ၁၅မှတ်ရထားတာပါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက ကွာတားအထိ တက်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်ကတော့ ၅ပွဲမှာ ၁ဝမှတ်ရထားပြီး နော်ဝေးကကလည်း ၈မှတ်နဲ့ တတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
ဒီအုပ်စုမှာလည်း ၄သင်းအပြိုင်ဖြစ်နေပြီး ပိုလန်ကတော့ ၅ပွဲမှာ ၄ပွဲနိုင်ထားပြီး ၁ပွဲရှုံးထား ပါတယ်။ ပိုလန်ဟာ ဆလိုဗေးနီးယားကို ၂ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အုပ်စုတွင်းမှာ ၁၂မှတ်နဲ့ ဦးဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြီးယား၊ ဆလိုဗေးနီးယား၊ အစ္စရေးလ်တို့လည်း အုပ်စု ဒုတိယရဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြင်သစ်ကတော့ တူရကီ၊ အိုက်စလန်တို့နဲ့ ၃သင်းပြိုင်နေရပါတယ်။ ၃သင်းစလုံး ၅ပွဲအပြီးမှာ ၁၂မှတ်စီရထားကြပြီး အုပ်စု ပထမ၊ ဒုတိယနေရာ အတွက် အခွင့်အရေးရှိနေကြတာပါ။ ပြင်သစ်က တူရကီကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် မနေ့ကတော့ အယ်ဘေးနီးယားကို ၄-၁ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တူရကီကလည်း အန်ဒိုရာကို ၁ဂိုးတည်းနဲ့နိုင်ခဲ့သလို အိုက်စလန်ကလည်း မော်လ်ဒိုဗာကို ဂိုးပြတ်နိုင်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား တတိယရခဲ့တဲ့ ဘယ်ဂျီယံကတော့ အုပ်စုတွင်းမှာ ပွဲတိုင်းနိုင်ထားပြီး ၁၅မှတ် ရနေပါတယ်။ ရုရှားကတော့ ဘယ်ဂျီယံကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲကလွဲရင် ၅ပွဲမှာ ၄ပွဲနိုင်ထားပြီး ၁၂မှတ်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ စကော့တလန်ကတော့ ၆မှတ်သာ ရထားသေးလို့ အခွင့်အရေး နည်းနေပါတယ်။
ချန်ပီယံဟောင်း အီတလီကလည်း နည်းပြသစ် မန်ချီနီ လက်ထက်မှာ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက်ကောင်းနေပြီး အုပ်စု ၅ပွဲစလုံး နိုင်ထားပါတယ်။ ၁၅မှတ်ရထားတဲ့ အီတလီရဲ့ နောက်မှာ နော့ဝစ်ချ်တိုက်စစ်မှူး ပူကီ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဖင်လန်က ၁၂မှတ်ရထားပါတယ်။ ကစားသမားကောင်းတွေရှိပေမယ့် ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘော့စနီးယားကတော့ ၇ မှတ်သာ ရထားလို့ အခွင့်အရေးနည်းနေပေမယ့် တတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အသင်းကြီးတွေ အခြေအနေ ကောင်းနေတဲ့ ယူရို ဥရောပ ခြေစစ်ပွဲများ